Zvinyorwa (s) Hazvigone Kuverengwa; Kwete Verenga Mvumo
musha Products DataNumen Access Repair Zvinyorwa (s) hazvigone kuverenga; hapana mvumo yekuverenga pane 'xxxx'.
Ruzivo rwakadzama nezve "Rekodhi (ma) Hazvigone Kuverengwa; Kwete Kuverenga Mvumo" Kanganiso
Meseji yekukanganisa inobuda kana iwe ukaedza kuvhura yakashata MDB faira ine Microsoft Access:
Zvinyorwa (s) hazvigone kuverenga; hapana mvumo yekuverenga pane 'xxxx' (Kanganiso 3112)
uko 'xxxx' iri zita rechinhu Chekuwana, inogona kunge iri a system chinhu, kana chinhu chemushandisi.
Iyo skrini yemessage yekukanganisa inotaridzika seiyi:
Zvinyorwa (s) hazvigone kuverenga; hapana mvumo yekuverenga pane 'MSysAccessObjects'
Iyi inogona kutevedzwa Microsoft Jet uye DAO kukanganisa uye kodhi yekukanganisa ndeye 3112.
Uchasangana nekanganiso iyi kana iwe usina mvumo yekuverenga yetafura yakatarwa kana mubvunzo kuti uone data rayo. Iwe unofanirwa kubvunza yako system manejimendi kana iye musiki wechinhu kuti uchinje mvumo yako mvumo.
Nekudaro, kana iwe uine chokwadi chekuti une mvumo pachinhu, asi uchiri kuwana chikanganiso ichi, ipapo zvingangoita kuti ruzivo rwechinhu uye data rezvivakwa zvakaora zvishoma uye Microsoft Access inofunga kuti hauna mvumo yekuverenga yechinhu chakakanganisika.
Unogona kuedza chigadzirwa chedu DataNumen Access Repair kudzoreredza MDB dhatabhesi uye kugadzirisa dambudziko iri.
Semuenzaniso yakashata MDB faira inokonzeresa iko kukanganisa. mydb_4.mdb
Iyo faira yakanunurwa ne DataNumen Access Repair: dzakavanzika.mdb (Tafura ye'Recovered_Table2 'iri mufaira rakanunurwa rinoenderana netafura ye'Vashandi' mune iyo isina kukamurwa faira)
Inotapika Microsoft Jet uye DAO Zvikanganiso
Zvinyorwa (s) hazvigone kuverenga; hapana mvumo yekuverenga pa. (Kukanganisa 3112)